बस र ट्रक एकआपसमा ठो’क्किँ दा ३ जनाको मृ त्यु, २४ घा इते !! (भिडियो हेर्नुहोस्) – Khabar28media
बस र ट्रक एकआपसमा ठो’क्किँ दा ३ जनाको मृ त्यु, २४ घा इते !! (भिडियो हेर्नुहोस्)
September 14, 2021 - by Vikash - LeaveaComment
पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरमा बस र ट्रक एकआपसमा ठो’क्किँ’दा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । काँकडभिट्टाबाट महेन्द्रनगरका लागि छुटेको सुप्र०२–००१ नंको यात्रुबाहक बस र ना६ख ७१२६ नंको ट्रक नवलपुरको गैँडाकोट–१० , २३ स्मृति पुल नजिक एकआपसमा आज विहान ठो’क्कि’एको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीपूर्व नवलपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलीपकुमार गिरीका अनुसार बस सडकबाट १० मिटर तल खस्दा सवार तीन जनाको घटना स्थलमै मृत्यु भएको हो । मृतकको अझै पहिचान खुलेको छैन । उहाँका अनुसार मृत्यु हुनेमा दुई महिला र एक पुरुष छन् । प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा २४ जना घाइते भएका छन् ।
बस सडकदेखि १० फिट तल खस्दा दुई जना महिला र एकजना पुरुषको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका सूचना अधिकारी दिलिप कुमार गिरीले जानकारी दिए । दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनीहरुको नयाँ मेडिकल कलेज भरतपुर चितवनमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । मृतकहरुको परिचय खुलेको छैन ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीपूर्व नवलपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलीपकुमार गिरीका अनुसार बस सडकबाट १० मिटर तल खस्दा सवार तीन जनाको घटना स्थलमै मृत्यु भएको हो ! उहाँका अनुसार उहाँका अनुसार मृत्यु हुनेमा दुई महिला र एक पुरुष छन् ।
बसमा चालकसहित २६ जना सवार रहेका बताइएको छ । तीमध्ये तीन जना घाइतेको अवस्था गम्भीर छ । यसैगरी ट्रकका चालकसमेत घाइते भएका छन् । घाइतेकोे नयाँ मेडिकल कलेज भरतपुर चितवनमा उपचार भइरहेको प्रनाउ गिरीले बताउनुभयो । फाइल फोटो साभार: इताजा खबर बाट
त्यस्तै यो अर्को समाचार पनि हेर्नुहोस्: सीता म’रेपछि श्रीमान घरबाट निस्किएको प्रस्ट भयो, त्यो दिनको सि.सि.टिभी हेर्नुहोस् सबै नालीबेली यस्तो (भिडियो भिडियो हेर्नुहोस्)
Previous Article टिकटक बनाउने क्रममा सेती नदीमा ख स्दा नवविवाहिता बेप त्ता !! (भिडियो हेर्नुहोस्)
Next Article कतार प्रहरीमा ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरुका लागि जागिर खुल्यो, एसरी दिनुहोस् आवेदन ।